Izindaba - 2021 iHonda CRF300L neCRF300L American Rally kumenyezelwe
Uhlobo Lwesikhwama (CGH)
Uhlobo Lwesikhwama (XG)
Iphuzu Eliphansi Lokulengiswa Eliphansi (XT)
Aluminium okubambelela ngocingoPA-1500-2000
Uhlobo lwe-Bolt (NLL)
Uhlobo lwe-Bolt (NLD)
Uhlobo umfutholuketshezi (NY)
I-NXJG (Uhlobo lwe-Wedge)
Ikhava wokuvala futhi NXL-NXLJ
Donsa uhlobo lwenduku （NXJ）
Ijoka Plate L Uhlobo
Izikhumulo zeTorque (Uchungechunge lwe-BLMT)
Parallel Groove Ngocingo (JB-JBL-JBT-JBTL)
Ukubhoboza Ngocingo (JJC-JJCD)
I-2021 Honda CRF300L neCRF300L American Rally kumenyezelwe
Njengoba uDennis Chung, owesilisa wakwaHonda eToronto, aqagela ngesikhathi iHonda Europe imemezela lezi zindaba ekuqaleni kukaDisemba, imoto yezemidlalo entsha neyenziwe ngcono yakwaHonda izongena emakethe yaseMelika. Eqinisweni, uHonda uthe iCRF iyimidlalo emibili edayiswa kakhulu embonini yezithuthuthu.
Nge-CRF300L ne-CRF300L Rally entsha, umsebenzi ukukhulisa amandla, ukunciphisa isisindo nokwenza ngcono ukusebenza komgwaqo? "Ngaphandle kokunikela ngenani, ukuthembeka nokubukeka kwesitayela, la magugu, ukubaluleka nokwethenjwa kudlale indima ebalulekile ekuthandweni komshini." Yize sikuqonda ukuthi le mishini emibili icishe ifane ngokusebenza, ngaphandle kwamandla kaphethiloli, Ngaphezu komehluko phakathi kwesigadli esijwayelekile nefasitela lomoya elinefreyimu lemoto ye-rally, sifaka nokukhishwa okuphelele kwabakwaHonda kwalezi zinhlobo ezimbili ezingezansi.
Amandla angeziwe ne-torque kutholakala ngokwandisa ukufuduka ngo-15% -kusuka ku-250 kuye ku-286 cc ngenkathi futhi kuthuthukiswa ukusebenza kwasemgwaqeni ngokwandisa ukushaywa kokumiswa nokususwa komhlaba. Ngasikhathi sinye, abakwaHonda bathi isisindo semoto sisonke sehliswe ngamakhilogremu ayi-11, okutholakala kakhulu ngokusebenzisa ukuhlaziywa kwezobunjiniyela okusizwa ngamakhompiyutha ukukhulisa ukushuba kwepuleti nosayizi wamabhubhu ezintweni ezingenakubalwa. Amathiphu wesitayela aqhamuka ochungechungeni lwe-Honda's CRF Performance, ngenkathi i-MSRP "isencintisana kakhulu."
Ngomzimba wayo kanye nemidwebo ebomvu, emhlophe, emnyama nokumnyama, i-CRF300L ihlose ukulingisa ukubukeka kochungechunge lweCRF Performance, kufaka phakathi i-Baja-based CRF450X.
Indawo yokugibela Indawo yokugibela ishintshiwe ukuze kuthuthukiswe okokufaka kwabagibeli nokuhamba kwezimoto. I-angle yokushanela yebamba yokubamba iyakhushulwa ukwenza indawo yendololwane ibe yemvelo ngokwengeziwe, ukuqondisa kube lula, futhi isisindo sesibambo siyakhushulwa ukunciphisa ukudlidliza. Ububanzi bezindawo ezingemuva naphakathi esihlalweni buhlala bunjalo ukugcina ukunethezeka, kanti indawo engaphambili incane ukuthuthukisa okokufaka kwabagibeli ngamathanga namadolo. Ama-spikes ezinyawo nawo ahlehliselwa emuva, ngaleyo ndlela kube lula ukusebenza kwezinyawo kwe-lever shift kanye ne-brake pedal, futhi ikhava yangemuva yesandla se-rocker arm yenziwe kabusha ukunciphisa ububanzi. Kuhlinzekwa nezingwegwe zokuthutha abagibeli.
Imitha Imitha entsha inezinhlamvu ezimnyama ngemuva, futhi izinhlamvu zikhudlwana ngo-6 mm ukuthuthukisa ukubonakala. Ngaphezu kokufundwa kwejubane, iwashi ne-rpm, kungezwe izinto ezintsha, kufaka phakathi indawo yamagiya, ibanga likaphethiloli nokusetshenziswa kukaphethiloli. Imitha iphinde yehliswe ngamakhilogremu ayi-0.01.
Uhlelo lwenjini / lokudlulisa luqale kusuka kuCRF250L, kwaHonda balungisa isitshalo samandla esisebenza ngogesi owodwa opholile ongamanzi, sandisa unhlangothi ngo-8 mm (isiyonke ingu-63.0 mm), ngenkathi sigcina ububanzi besilinda esingu-76.0 mm singashintshiwe. Lokhu kuholele ekukhuleni okungu-36cc kokufuduswa, ngenani eliphelele lama-286cc, okuholele ekutheni igama liguqulwe libe yiCRF300L. I-piston stroke ende yandisa amandla ne-torque kulo lonke uhla lwejubane.
Ngaphezu kwalokho, i-camshaft iphinde iguqule ukuphakama nesikhathi ukukhulisa ukuphuma engxenyeni engezansi yebanga lejubane, okuvame ukusetshenziselwa ukugibela edolobheni nokushayela ngaphandle komgwaqo.
Idizayini yesihlungi somoya sokungenisa / sokukhipha sishintshiwe ukuze kugcinwe umzimba omkhulu we-throttle ongu-38 mm futhi kufakwe uhlelo lokukhipha olusha olunesihloko esikhanyayo nomshini oshisayo-yize ukwehliswa kokukhishwa komsindo kutholakala ngokulawulwa okungcono kokudlidliza. Kuhlanganisiwe, lezi zinguquko zingathuthukisa ukulawulwa kwe-throttle, ikakhulukazi kuma-revs aphansi.
Njengakuqala, indlela ye-valve yenjini isebenzisa ukwakheka kwengalo ye-rocker ukufeza i-compact cylinder head, kuyilapho i-balancer ingafinyelela ukusebenza ngokushelela.
Isilinganiso segiya lika-gearbox odonsa ngamagiya ayisithupha sibuyekezwe ngonyaka wezi-2021. Ibanga eliphakathi kwamagiya anejubane lincane, kanti nebanga elisemagiyeni anejubane likhudlwana, ukuze ukwazi ukukhethwa kwamagiya angcono kunakho konke ngenkathi usazuza kahle isivinini esikhulu. ukuhamba ngomkhumbi. Lokhu kushaya ibhalansi enhle phakathi kokusebenza kwedolobha. , Izicelo zebanga elide nezangaphandle.
I-clutch inconyiwe ngokudonsa kwayo okulula. Imodeli izoba nokudonsa okulula (cishe okungama-20%) ngo-2021, ngenxa ye-clutch esizayo / eshibhile, enikezela nokusebenza okungcono ngesikhathi sokushona okusebenzayo.
I-chassis / ukumiswa yize injini inamandla amakhulu, ukwakheka kwezinto eziningi kwehlukile, okunciphisa isisindo semoto. Isibonelo, isibopho esiphansi kathathu manje senziwe nge-aluminium esikhundleni sensimbi, futhi isisindo sehliswa ngo-0.1 lb. Lokhu akugcini nje ngokubangela ukwehla kwamandla, kepha ngoba ukwehla kwesisindo kwenzeka kakhulu kakhulu emotweni, isikhungo amandla adonsela phansi nawo aphansi.
Ngokwenza ngcono izingxenye eziyinhloko zohlaka, isisindo sefreyimu sincishiswa ngamaphawundi angu-0.3, ngenkathi ukuqina kwe-lateral kuncishiswa ngama-25%, ngaleyo ndlela kuthuthukiswa ukuqhutshwa kwemizwa nokuzizwa kokuhlala ngaphakathi: ithubhu phansi lehliswe ngo-30 mm; the tube phansi gusset Ezincane; ipayipi elikhulu lifushane ngama-20 mm; ububanzi bethubhu le-stent lincishiswe ngo-3.2 mm kuye ku-25.4 mm.
Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa kohlaka nokuklanywa kwekhilikithi kukhulise ukususwa komhlaba ngamasentimitha ayi-1.2, ngaleyo ndlela kunciphisa ithuba lokuphazamiseka lapho ushayela ezimeni ezingekho emgaqweni.
Ubakaki unamandla futhi ungamelana nokugoba, futhi indawo yayo yonyawo manje isisikhulu ngo-10% ukwenza ngcono ukuqina kwezimoto lapho kupakwa.
Ingalo ye-rocker yangemuva iyefana nohlaka, kanti ukuqina kwe-lateral kanye ne-torsional kwengalo ye-rocker yangemuva kuncishiswe ngama-23% no-17%, ngokulandelana. Ububanzi obuseduze ne-pivot buncishiswe nge-15 mm, futhi ingxenye yonke yomhlangano ishintshiwe ukuze inikeze ukusatshalaliswa kokuphazamiseka okuthe xaxa, okuholela ekuzizweni okungcono nasekuphatheni okungabikezelwa. Isisindo se-rocker arm naso sehlisiwe ngamakhilogremu we-0.08-ukunciphisa isisindo sentwasahlobo, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe isenzo sokumiswa.
Ukumiswa Njengoba kushiwo ngaphambili, ukumiswa kuhlanganisa imfoloko eguquliwe engama-43mm eShowa kanye nePro-Link single shock system. Kodwa-ke, ukunwetshwa kokumiswa kwandisiwe, futhi ukuhamba kwamasondo ngaphambili nangasemuva kungamasentimitha ayi-10.2, ukwanda kwamasentimitha angu-0.4 no-.6 amayintshi, ngokulandelana. Amasethingi nawo aguquliwe futhi kusetshenziswe izixhumanisi ezintsha ezingemuva nezixhumanisi. Umphumela ohlangene ukwenziwa ngcono kokumiswa, ikakhulukazi ngesikhathi sokugibela ngaphandle komgwaqo.
Amabhuleki we-Hydraulic asetshenziswa ngaphambi nangemva kwebhuleki. Ama-rotor anama-rotor angama-256 nama-220 mm ngokulandelana, kanye ne-ABS etholakalayo, engalawula kahle ukubopha amabhuleki ezimweni ezahlukahlukene. Ngokufana nokwakheka okusetshenziswe ochungechungeni lweCRF Performance, i-new brake master cylinder entsha inethangi likaphethiloli. Lokhu konga isidingo sokuxhuma ithangi lamanzi ku-hose eklanywe ngaphambilini, okuholele ekubukekeni kuhlanzeke. Kalula, i-ABS ingavalwa ngemuva ukuze inikeze umuzwa ohlukile wokugibela ezimweni ezingekho mgwaqo.
Amasondo ayafana nomshini wokusebenza osezingeni eliphakeme. Usayizi wamasondo ngamasentimitha angama-21 amasondo angaphambili namasentimitha ayi-18 amasondo angemuva. Bangakwazi ukugoqa kahle ezindaweni ezimbi. Uma kuqhathaniswa nemodeli yango-2020, amarimu amnyama e-aluminium apholishiwe, anokubukeka okucwebezelayo, futhi kulula ukuwahlanza.
I-sprocket yangemuva mncane kwezinye izindawo futhi inamabhawodi amancane (M8 esikhundleni se-M10), egcina amakhilogremu ayi-0.04. I-asi engemuva manje isiyize futhi isheulwe cishe amakhilogremu ayi-0.03.
Izesekeli zakwa-Honda zinikeza izesekeli eziningi, kufaka phakathi onogada bezandla, amapuleti ama-anti-skid, amasokhethi kagesi, izipikisi ezibanzi, amabhokisi aphezulu, ama-racks, njll.
I-CRF300L Rally yakhelwe ukuvusa isithombe sokuthi uRicky Brabec uwine i-CRF450 Rally ye-Dakar Rally. Kususelwa kuCRF300L ejwayelekile kepha inamandla amakhulu kaphethiloli, isivikelo sesandla nesivikelo somoya esinefreyimu, okwenza ikulungele ukuzidela okude ngaphandle kokukhokhela ukushesha, umhlangano weCRF300L unethangi likaphethiloli elikhudlwana futhi unesisindo esingamakhilogremu ayi-9 kuthrafikhi yasemadolobheni ngisho nasemizileni. Ngaphansi kwemodeli yangaphambilini, ukufuduswa kukhuphuke ngo-15%, ngaleyo ndlela kwenyusa amandla ne-torque, okwenza ukuzidela kwebanga elide kube lula kunakuqala.
Ukumodela Ngo-2021, abakhiqizi bakwaHonda bamukela umhlangano okhona weCRF250L ukuyenza ibe nenjabulo enkulu, bandise ithangi likaphethiloli ngo-25% (amalitha angu-0.7 ngamalitha angu-3.4, iningi kakhulu esigabeni salo). Ngokubheka umnotho kaphethiloli omuhle kakhulu wale modeli, iCRF300L inebanga elibonakalayo esivivinyweni samamayela angaphezu kwama-250.
Njengomshini wokuqina eqenjini laseMonster Energy Honda, ingemuva ligcinwe lilincane, okwenza kube lula ukuthi umgibeli anyakaze futhi agxilise ikhwalithi yengaphambili lemoto. Imidwebo ebomvu edonsa amehlo, emhlophe, emnyama nokumnyama ilingisa ukubukeka kochungechunge lweCRF Performance.
Kwehliswe isisindo sezingxenye eziningi, kufaka phakathi i-fender yangaphambili (yehliswe ngamakhilogremu ayi-0.02), izembozo ezisemaceleni (ezincishiswe ngamaphawundi ayi-0.05), ibhokisi lamathuluzi (lehliswe ngamakhilogremu ayi-0.03) kanye nebakaki lepuleti lelayisense (elehliswe ngamaphawundi ayi-0.04).
Indawo yokugibela ngasikhathi sinye, indawo yokugibela ishintshiwe ukuze kuthuthukiswe okokufaka kwabagibeli nokuhamba kwemoto. Ukuze wenze indawo yendololwane ibe yemvelo ngokwengeziwe, isiteringi silula, isibambo esishanela isibambo siyakhuphuka, futhi kunezelwa izinsimbi zokubamba ezimbili (ama-ounces ama-5.8 ngamunye) ukunciphisa ukudlidliza, kuthi kufakwe injoloba ezinyaweni zezinyawo ngesizathu esifanayo sesikhulumi . Isihlalo sisebenzisa iphedi entsha yokufaka injoloba. Uma kuqhathaniswa nemodeli ejwayelekile, ububanzi bayo bunyuswe ngo-20 mm baya ku-190 mm, yize ingaphambili ligcinwa lincane ukuvumela izinyawo zomgibeli ukuthi zithinte umhlabathi lapho kudingeka. Izingwegwe zokuthutha abagibeli ziyimishini ejwayelekile.
Ama-spikes ezinyawo nawo ahlehliselwa emuva, ngaleyo ndlela kube lula ukusebenza kwezinyawo kwe-lever shift kanye ne-brake pedal, futhi ikhava yangemuva yesandla se-rocker arm yenziwe kabusha ukunciphisa ububanzi.
Imitha Imitha entsha yedijithali inezinhlamvu ezimnyama ngemuva okumhlophe futhi izinhlamvu zikhudlwana ngo-6 mm ukwenza ngcono ukubonakala. Ngaphezu kokufundwa kwejubane, iwashi ne-rpm, kungezwe izinto ezintsha, kufaka phakathi indawo yamagiya, ibanga likaphethiloli nokusetshenziswa kukaphethiloli. Imitha iphinde yehliswe ngamakhilogremu ayi-0.01.
Uhlelo lwenjini / lokuhambisa luqale emhlanganweni weCRF250L. AbakwaHonda bashintshe isitshalo samanzi esiphehla uketshezi oluphefumulelwe ngo-4-stoole single-cylinder, sandisa unhlangothi ngo-8 mm (isiyonke ingu-63.0 mm), ngenkathi ishiya isibalo esingu-76.0 mm singashintshiwe. Lokhu kuholele ekukhuleni okungu-36cc kokufuduswa, kwabalelwa ku-286cc, okwenze ukuthi igama lishintshe libe yiCRF300L Rally. I-piston stroke ende yandisa amandla ne-torque kulo lonke uhla lwejubane.
Ngokwenza ngcono izingxenye eziyinhloko zohlaka, ukuqina kwesikhashana kozimele kuncishiswe ngama-25%, okuthuthukisa ukuhamba nokuzizwa kwabagibeli, futhi isisindo sefreyimu sincishiswe ngamaphawundi angu-0.3: ithubhu phansi lincishiswe ngo-30 mm; ishubhu phansi I-gusset incane; ipayipi elikhulu lifushane ngama-20 mm; ububanzi bethubhu le-stent lincishiswe ngo-3.2 mm kuye ku-25.4 mm.
Ingalo eyodwa yokujikijela ingalo yangemuva ye-aluminium ithuthukisa izici zokugoba ezilungiselelwe, futhi ukuqina kwe-lateral kanye ne-torsional kuncishiswe ngama-23% no-17%, ngokulandelana. Ububanzi obuseduze ne-eksisi ye-pivot buncishiswe ngo-15 mm, futhi ingxenye enqamulelayo yengxenye ishintshiwe ukuze inikeze ukusatshalaliswa kokuhlanekezelwa okuthe xaxa, okuholela ekuzizweni okungcono nasekuphatheni okungabikezelwa. Isisindo se-rocker arm naso sehlisiwe ngamakhilogremu we-0.08-ukunciphisa isisindo sentwasahlobo, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe isenzo sokumiswa.
Ukumiswa Njengoba kushiwo ngaphambili, ukumiswa kuhlanganisa imfoloko eguquliwe engama-43mm eShowa kanye nePro-Link single shock system. Imivimbo yamasondo angaphambili nangemuva ingu-10.2 inches kanye no-10.4 inches, ngokulandelana.
I-sprocket yangemuva mncane kwezinye izindawo futhi inamabhawodi amancane (M8 esikhundleni se-M10), egcina amakhilogremu angu-0.03 wesisindo. I-ekseli langemuva manje alinalutho, kunciphisa ukusikwa okwengeziwe ngamakhilogremu ayi-0.02.
Izesekeli zakwa-Honda zinikeza izesekeli eziningi, kufaka phakathi amasokhethi kagesi, izipikisi ezibanzi, izibambo ezifudumele, amabhokisi aphezulu, ama-racks, njll.
Iba wangaphakathi weMotorcycle.com. Okokuqala bhalisela incwadi yethu yezindaba lapha ukuthola izindaba zakamuva zesithuthuthu.